တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဖျင်အင်္ကျီလေး တထည်
ဖတ်ရင်းနဲ့ တောင် အတိက်ကို ပြန်သတိရစေတယ်
ဒီလိုနဲ့ကြွေလွှင့် သွားတဲ့ အာဇာနည်တွေ အများကြီးပါပဲ
ဒီလိုအဖြစ်တွေကို တို့တွေ ပြန်ပြန်ကြုံနေရဦးမှာပဲ...
ကိုလူထွေးဆိုရင်လဲ အဲဒီအင်္ကျီလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေကို ပြန်ပြန်တွေးမိရင် အမြဲတမ်း ရင်နင့်နေမိမှာပဲ...
အမရေ ဒီအကျီ င်္လေးကအာဇာနည်တယောက်ဝတ်ခဲ့တဲ့ အကျီ င်္လေးဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့နော်။ လေးစားပါတယ်။
မမေ.. တကယ့်အဖြစ်လား..၀တ္တုလားလို့..မမေးတော့ပါဘူး နော်..။
ကွန့်မင့်ရေးတာ ၂ခါရှိပြီ။ မပေါ်တာလား မရတာလားမသိ။
အဟောင်းတွေ အသစ်ဖြစ်တယ်မမေရယ်... လို့ အစချီပြီး အရှည်ကြီးရေးထားတာ.. ပေါ်ဘူးရယ်
အဲဒီလို မျိုးဆက်အလိုက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေလည်း များလှပြီ။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင်ဝဲလာတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ကြည့်လို့ရပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ၀မ်းနည်းရပေမယ့် မမေ့သင့်စရာ မမေ့နိုင်စရာတွေကို ပြန်သတိပေးသလိုမို့ ရေးတဲ့ မမေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
8/16/2009 11:44 PM
စာဖတ်ပြီး ရင်နှင့်အမျှ ခံစားရလို.
အဲဒီတုန်းက ညီမအသက်က ၁၁ နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်
ဒါပေမယ်. အာဇာနည်အဖေကြောင့် လမ်းလျှောက် ဒို.အရေးအော်ခွင့်ရခဲ့တယ်
ညီမတို.ကျောင်းက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အများကြီးနဲ.အတူ
အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်
အုတ်တစ်ချပ်ချင်း သဲတစ်ပွင့်ချင်း ပေါင်းစည်းလို.
ကြီးမားခိုင်ခံ့တဲ့ အဆောက်အဦးကြီးတွေ ဖြစ်လာတာမို.
ဆိုတဲ့ ပြောစကားတွေဟာ မမှန်ဖူးလို.
၈၈က ကျဆုံးသွားသောအာဇာနည်များအား အလေးပြုလျက်
အင်း အခုမှ ဖတ်ဖူးတာဆိုတော့လဲ အသစ်စက်စက်ပါဘဲလေ။ ခံစားမှုက အထွတ်အထိပ်ရယ်ပါ။ စိတ်မကောင်းဘူး။ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းပြီး တွဲလက်တွေ ညီနေကြတာကိုဘဲ မြင်ချင်လှပါပြီ။ အော်.. ကံကြမ္မာတရားတွေက မညှာမတာပြုရက်အားလိုက်ပါဘိ။
8/08/2010 1:47 AM
8/07/2012 6:32 PM
my teacher ... thanks foravery touching story ... would like to read many more, please ...